Raspberry Pi + Moodle = chikuva chakachipa chee-kudzidza | Linux Vakapindwa muropa
Raspberry Pi + Moodle = chikuva chakachipa chee-kudzidza
Unotoziva kuti iriko iro Moodlebox saizvozvowo, asi iwe unogona kuzvigadzira wega neyakareruka Raspberry Pi uye nekuisa inodikanwa Moodle software ... Nesoftware yekuwedzera isu tinokwanisa kuwedzera chishandiso chekushandisa ine yakapusa graphical interface kugadzirisa nyore uye kubata yedu Moodle server ye e-kudzidza kana rako wega chirongwa chedzidzo. Kunyanya kunakidza kune vese avo nyanzvi mune redzidzo chikamu avo vanoda kutora huchenjeri hwako kunzvimbo dzese.
Izvo zvinogona kuitwa nemhando dzakasiyana dzeakakurumbira SBC bhodhi, asi zvinokurudzirwa kushandisa iyo Rasipberry Pi 3 Model B neiyo Raspbian inoshanda sisitimu kana kugovera yakaiswa, kunyangwe isu tichigona zvakare kushandisa imwe Linux distro yeiyi bhodhi pasina dambudziko. Zviripachena, mamwe mapakeji ekuwedzera anofanirwa kuiswa pairi, iyo huru iri iyo Moodle software. Nezvo isu tine yakavhurika sosi, yakachipa uye inodhura uye inoshanda chikuva chekudzidzisa.
Yakachipa dzidziso yekudzidzisa nekuda kweplate uye kune chirongwa cheMoodle chekudzidzisa iyo yakagadziriswa zvisina mhosho uye ine anopfuura makumi masere nemasere masayiti akanyoreswa kuve nezviri mukati kubva pasirese, kubva kuzvikoro, kusvika kunzvimbo dzekumisa, mayunivhesiti, nezvimwewo, kubatsira vadzidzisi kugadzira nharaunda dzekudzidza pamhepo, makosi ekureba, makirasi uye mamwe mapurojekiti anonakidza ekudzidza se unoziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Raspberry Pi + Moodle = chikuva chakachipa chee-kudzidza
Iyo itsva vhezheni yeSlax inochinja Slackware yeDebian